WARBIXIN: Liverpool Oo Labo Jeer Kale Jabin Doonta Rikoorkooda Suuqa Kala Iibsiga Xagaagan Ka Dib Marka Ay Dhameystiraan Heshiiska Mohamed Salah
Heshiiska 39ka milyan ginni ee ay Liverpool kula soo wareegeyso Mohamed Salah waxa ay jabineysaa rikoorkooda suuqa kala iibsiga ee ay 35 milyan ginni kula soo wareegeen Andy Carroll lix sannadood ka hor.
Sida ay qortay jariirada Daily Mirror, waxaa rikoorkaas la jabin doonaa mar kale isla inta ka harsan bisha Juun ama suuqa kala iibsiga ee xagaagan.
Iyagoo ogolaaday inay bankiga u jabiyaan saxiixa xiddiga Roma Salah, kooxda Reds ayaa digniin ku bixisay in Salah uu yahay saxiixooda ugu horeeya ee xagaaga ee qeybta ah lacagta ka badan 150ka milyan ginni ee ay qarashgareynayaan.
Tababare Jurgen Klopp ayaa si joogta ah u sheegaya inuu u baahan yahay ugu yaraan afar saxiix oo muhim ah xagaagan kuwaasoo ay lacag badani ku baxeyso.
Klopp ayaa muhiimada siinaya xiddig u koontaroola khadka dhexe iyo daafac dhexe. Ciyaartoyda boosaskaas loo raadinayo ayayna u badan tahay inay ka qaalisan yihiin Salah.
Inkastoo Liverpool ay dib u dhac iyo ceeb kala kulantay suuqa kala iibsiga xagaaga ee ilaa iyo haatan, hadana Klopp ayaa leh qorshe cad oo meel u yaala waxaana ka mid ah inuu sidoo kale helo daafac bidix oo bedela xiddiga baxaya Alberto Moreno.
Waxaa weli la sugayaa in la arko halka ay ku danbeyn doonto cabashadii ay Southampton u gudbisay xiriirka kubada cagta Ingariiska ee Liverpool lagu eedeeyay inay si sharcidarro ah ugu dhawaatay Virgil van Dijk. Laakiin ciyaaryahanka ayaa weli ku adkeysanaya inuu doonayo inuu u wareego Anfield iyadoo Klopp uu sidoo kale muhiimad weyn siinayo daafac dhexe.
Ka hor ka laabashadoodii ceebta aheyd iyo raaligelintii ay bixiyeen madaxda Liverpool, waxa ay u muuqatay mid hubaal ah in Van Dijk uu noqonayo xiddiga ugu qaalisan abid Liverpool iyadoo heshiiskiisa uu kor u dhaafayay 50 milyan ginni.
Klopp ayaa weli jecel inuu la heshiiyo madaxda Southampton oo uu iska gadaal mariyo isfahamdarradii ka dhalatay xiisaha Van Dijk isagoo ogolaanaya inuu bixiyo lacag ay aqbali karaan kooxda Southampton.
Haddii uu ku hungoobo waxa ay weli u badan tahay inuu lacag rikoor adduun u noqoneysa daafac ku soo xerogeliyo daafac dhexe kale iyadoo xiddigaha sida Leonardo Bonucci (Juventus), Jerome Boateng (Bayern Munich) iyo Kalidou Koulibaly (Napoli) dhamaantood lagu qiimeeyay lacag la mid ah tan Van Dijk.
Xiddiga Klopp diirada u saaran ee xiddiga khadka dhexe waa mid kaliya oo xagaagan oo dhan la sheegayay, waxaana tababaraha Jarmalka uu doonayaa inuu Premier League keeno xiddiga Guinea u dhashay ee Naby Keita.
Keita ayaa wacdarro ka dhigay Bundesliga xilli ciyaareedkii dhamaaday isagoo ka caawiyay kooxda Red Bull Leipzig inay u soo baxdo Champions League, waxaana Isniintii loo xaqiijiyay inay tartanka ka qeybgalayaan inkastoo shaki laga geliyay markii hore madaama milkiilayaashooda ay sidoo kale leeyihiin kooxda Red Bull Salzburg oo iyadana Champions League u soo baxday.
Leipzig ayaa cadeysay inay doonayaan inay ceshtaan 22 jirkaan, waxaana gacantooda sii adkeyneysa in loo ogolaaday inay ka qeyb qaataan Champions League xilli ciyaareedka danbe.
Waxaa la sheegayaa in Reds ay ku qasban tahay inay ugu yaraan ku dalbato 50 milyan ginni haddii ay doonayaan in kooxda Bundesliga ka dhisan ay ku qasbaan inay iibiyaan xiddiga reer Afrika.